Mofon'aina Alarobia 12 Febroary 2015 | FJKM Amboniloha
Ny soa entin’ny Tenin’ Andriamanitra ho an’ny olony
Eto amin’ity toko ity no hitantarana ny fanekena nataon’ Andriamanitra tamin’i Abrama, taorian’ny niantsoany azy. Teo anatrehan’io fiantsoany an’i Abrama ho olony io no nanehoan’ Andriamanitra ny maha- zava-dehibe ny teniny.
Ny Tenin’ Andriamanitra dia ampinga sy aro ho an’ny olony (and 1-3)
Andriamanitra miantso sy manorina fanekena amin’izay nofidiny dia manolotra fanomezan-toky ho an’izay antsoiny ihany koa. Ambarany fa Izy Andriamanitra no ampinga sy aron’izay olona antsoiny. Hoy Izy : « Aza matahotra ry Abrama, Izaho no ampinganao sy valim-pitia lehibe indrindra ho anao « . Manambara izany teny izany fa Izy dia miara-mandeha amin’izay antsoiny. Ka amin’ny fotoana rehetra iarahany amin’ny olony dia maneho fankasitrahana Izy. Tena mandrava sy manafoana ny ahiahy rehetra izany.
Ny Tenin’ Andriamanitra dia fampanantenana ho an’ny olony (and 4-5)
Na dia manana endrika fampanantenana ihany aza iry voalohany dia lazain’ny Tompo miavaka kosa eto ny tena fampanantenany. Nilain’i Abrama tokoa izany raha nijery ny ho aviny izy. Koa amin’izany « ho avy » izany indrindra no hanomezan’ Andriamanitra toky ho an’ny olona antsoiny, dia fampanantenana mitohy amin’ny taranaka handimby ;
Inona no teny fanomezan-toky efa noraisinao na tianao horaisina amin’ny maha-olom-boantso anao ?
Catégories :	Mofon'aina	/ par AnjGab 12 février 2015